फौजदारी कानून समाज गठनः अध्यक्षमा प्रा.डा रजितभक्त प्रधानाङ्ग
२६ मंसिर । फौजदारी कानून समाज गठन गरिएको छ । फौजदारी मुद्दामा निरन्तर काम गरेका र फौजदारी कानुनलाई मुख्य विषय बनाएर स्नातकोत्तर गरेका कानून व्यवसायीहरुको भेलाबाट उक्त संस्था गठन भएको हो ।
भेलाले प्रा.डा रजितभक्त प्रधानाङ्गको अध्यक्षतामा १७ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरेको छ । उपाध्यक्षहरुमा वरिष्ट अधिवक्ता लभ कुमार मैनाली र प्रा.डा लक्ष्मी प्रसाद मैनालीलाई चयन गरिएको छ ।
यसैगरी तदर्थ समितिको महासचिवमा डा. कन्साङ लामा सचिवमा अधिवक्ता डिल्लीराम श्रेष्ठ र कोषाध्यक्षमा अधिवक्ता निर्मला शाक्यलाई चयन गरिएको छ । तदर्थ समितिको सदस्यमा अधिवक्ताहरु धणेन्द्र श्रेष्ठ, दान बहादुर बुढा, शान्तीराम खतिवडा, सरिता शर्मा, धिरज पोखरेल, हरि मैनाली, शुनिल पोखरेल, रविन्द्र भट्टराई, वि.वि राई, डा. नीहा महर्जन डिल्ली मैनालीलाई चयन गरिएको छ ।
भेलाले फौजदारी न्याय मर्मअनुसार काम हुन नसकेकोमा सहभागीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । फौजदारी न्यायको सिद्धान्त अनुसार न्याय सम्पादन हुनुपर्नेमा सहभागीहरुले जोड दिएका छन् । समाजले फौजदारी न्याय प्रणालीका सम्वन्धमा नयाँ सिराबाट बहस आरम्भ गर्ने वरिष्ट अधिवक्ता लव कुमार मैनालीले जानकारी दिए ।
यसैगरी प्रा.डा रजितभक्त प्रधानाङ्गले न्यायलय बाट हुने फैसलाहरुमा समेत फौजदारी न्यायको मर्म र सिद्धान्तलाई ख्याल नगरी निर्णय हुने गरेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । समाजले आगामी दिनमा यस सम्वन्धी नीतिगत बहस चलाउनुका साथै विभिन्न प्रकाशनहरु पनि गर्ने जानकारी दिए ।
२०७७ मंसिर २६ मा प्रकाशित